I-Metrology yabantwana, ke baya kuyiqonda ngcono | Oomama Namhlanje
I-Metrology yabantwana, ke baya kuyiqonda ngcono
UAlicia tomero | 20/05/2021 10:00 | ekufundeni
UMeyi 20 lusuku lweMetroloji lweHlabathi nokutyikitywa kwale ndibano ibizwa ngokuba yiMeter. Imelwe zizizwe ezilishumi elinesixhenxe kwaye indibano yayo yokuqala yabanjwa ngoMeyi 20, 1875.
Le ndibano isikhumbuza ngokubaluleka kokubaluleka kwexabiso okanye inqanaba lokulinganisa kwihlabathi liphela. Le ndlela isetyenziswe kwimicimbi emininzi yemihla ngemihla kunye nemisebenzi ebalulekileyo, njengakwinzululwazi, kwezempilo, kwezorhwebo nakwizicelo zamashishini.
1 Yintoni imetroloji?
2 Zazalwa njani iiyunithi zangoku zemilinganiselo?
I-Metrology yinzululwazi efunda umlinganiso, kufuneka ichaneke kwaye isebenze kwiinkalo ezininzi kwaye ngokuyinxalenye yaziwa kubo bonke abantu. Le ngongoma ibaluleke kakhulu ukuze sonke sabelane kwaye siququzelele Yonke into esisebenza ngayo kwaye ngendlela efanayo.
Ngokomzekelo, metrology isetyenziswa kwimpilo yabantu. Bonke abantu badinga inkqubo yezempilo apho kusetyenziswa imilinganiselo kwaye ngumba odlala indima ebaluleke kakhulu. Ngale ndlela ichanekileyo, iiparameter ezininzi kufuneka zilinganiswe ukuze ndikwazi ukwenza isifo.
Ukuveliswa kunye nokuthengiswa kweemveliso kunye nayo yonke into evela kuyo ufuna inkqubo yokulinganisa eyaneleyo, Ngale ndlela lonke urhwebo luya kusebenzisa iitafile ezifanayo ngobude nobunzima ukuze kungabikho ngxabano.
Iinkqubo zokuhamba ngesathelayithi nazo zixhomekeke kwimilinganiselo. Basebenzisa ulungelelwaniso olufanayo lwamazwe aphesheya ukucacisa ngokuchanekileyo amaxesha ngokuchanekileyo njengendawo. Umzekelo uya kuba kukusetyenziswa kwemilinganiselo kwi unxibelelwano lweekhompyuter ezintsonkothileyo, apho wonke umntu anokuzisebenzisa, inqwelomoya inokuhamba, isuke kwaye ihlale emhlabeni kungabonakali nto.
Zazalwa njani iiyunithi zangoku zemilinganiselo?
Nangona itekhnoloji kunye nenkqubela phambili yethu zazingekho kwiinkulungwane ezidlulileyo, imetroloji yayihlala iyinkqubo yokulinganisa. Ihlala ikhona kwaye iphuhlisiwe kule minyaka idlulileyo kwaye kuxhomekeke kwindaleko yoluntu kwixesha ngalinye.
Kule minyaka isetyenzisiweyo le ndlela yokulinganisa ukufumanisa inzululwazi kunye nokuyila. Ukuyilwa kwakhe kuyilelwe ukuphucula umgangatho wobomi babantu, owokuvelisa amashishini kunye norhwebo lwamanye amazwe kwanokukhusela okusingqongileyo.
Inkqubo yokulinganisa yazalwa ngo-1789 ngexesha lovukelo lwaseFrance, xa iNdibano yesiZwe yaseFrance yacebisa kwiAkhademi yeSayensi inkqubo entsha yemilinganiselo. Kwafuneka wenze Inkqubo entsha yokulinganisa kunye nokuma komntu wonke, apho iinyawo nezandla zazingasenaxabiso. Phambi kokuba ilinganiswe nale nkqubo, kodwa ubude bezandla okanye iinyawo buyahluka ngokuxhomekeke emntwini.
Ngale ndlela isentimitha yachazwa kwaye ukusuka apho kwacetyiswa ukongeza ilitha njengevolumu. Ulwelo olungena kwityhubhu enecala le-10 cm kunye nekhilogram njengobunzima belitha yamanzi lwenziwa njengomlinganiso. Izigqibo zaye zenziwa, zibonisa ukuphindaphindwa kweeyunithi ukwahluka ukusuka kwi-10 ukuya kwi-10.
Ngalezi zindululo imitha yenziwe njengeyunithi yokulinganisa ubude, ukwenza ikopi ngqo egcinwe kwigumbi lokhuseleko. Kukwenzeka okufanayo ngekhilogram, njengoko sichazile ukuba iya kuba bubunzima bamanzi obulingana nebhakethi, oko kukuthi, iisentimitha ezili-10 zekyubhiki. Ubunzima benziwe obuya kusebenza njengomgangatho we kilogram eya kugcinwa njengemitha.
Ezinye zeentlobo zeeyunithi zemilinganiselo ezisetyenzisiweyo namhlanje zezi: yentlama: iikhilogram, iigrama; sisebenzisa ubude: ikhilomitha, imitha; umthamo: Ikhololitha, ilitha; ixesha elidlulele: iiyure, imizuzu, imizuzwana, ikhalenda; imilinganiselo: isikali; ubushushu: Ithemomitha; Uxinzelelo: barometer, manometer.
Kubaluleke kakhulu ukuba wonke umntu alwazi olu hlobo lokulinganisas ke akukho mahluko. Onke amaziko esizwe emetroloji aqhubekeka phambili ukuphuhlisa. Zenzelwe ukuba zivunywe ngokuzithemba kwaye ziqinisekiswe kuwo wonke umntu.
Imidlalo yokufundisa abantwana iitafile zokuphindaphinda
Umendo opheleleyo kwinqaku: Oomama Namhlanje » Phuhliso » ekufundeni » I-Metrology yabantwana, ke baya kuyiqonda ngcono
Usana lwam alukhuli iinwele
Usana lwam lurhubuluza lubuye